खेल्कुद Archives - SAMACHAR SANJAL
नेपाललाई ठूलो झड्का सय रन बन्दा कप्तान पारस खड्का आउट
काठमाडौं : जिम्बावेमा जारी विश्वकप छनोट प्रतियोगिताको आफ्नो महत्वपूर्ण खेलमा नेपालले बिहीबार बलियो प्रतिद्वन्द्वी स्कटल्यान्डसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेको छ। टस जितेर पहिले ब्याटिङमा उत्रेको नेपाले सुरुमै एक पछि अर्को झट्का व्यहोरेको नेपालले २८ ओभरको सुरुमै कप्तान पारस खड्कालाई गुमाएको छ । पारसलाई गुमाएसँगै नेपालको सात विकेट गएको छ । पारस हाफ सेन्चुरी पूरा गरेसँगै आउट भए । कप्तान पारस ६३ रनमा आउट भएका हुन् । २४ ओभरमा सोमपाल कामीलाई गुमाउँदै नेपालले ६ विकेट गुमएको थियो । यसअघि आठ ओभर पूरा गर्दा नेपालका आरिफ शेख आउट भएका थिए । पाँच विकेट गुम्दासम्म…
नेपालविरुद्ध शतक हान्ने जिम्बाब्वेका दुबै खेलाडी आउट( हेर्नुहोस पुरा बिवरण !!!)
२० फागुन, काठमाडौं । विश्वकप छनोट खेलमा नेपालविरुद्ध शतक प्रहार गर्ने दुबै खेलाडी आउट भएका छन् । शतक पूरा गर्ने खेलाडीमध्ये शिकन्दर राजा क्याच आउट भए भने ब्रेन्डन टेलरलाई सोमपाल कामीले आउट गरे । जिम्बाब्वेको क्वीन्स स्पोर्टस् क्लबमा टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको जिम्बाब्वेका लागि शिकन्दरले १२३ रन बनाएर आउट भए भने ब्रेन्डन टेलर १०० रनमा आउट भए । नेपालका लागि बसन्त रेग्मीले २, सोमपाल कामी, ललितनारायण राजवंशी र सन्दिप लामिछानेले १/१ विकेट लिए ।
नेपाल भर्सेस जिम्बाब्वेः LIVE स्कोर हेर्नुहोस्
सन्दिप लामिछानेको यी १० रोचक कुरा सायद तपाईंलाई थाह छैन
March 2, 2018 admin>
काठमाडौं । पछिल्लो समय नेपाली युवा स्पिनर सन्दिप लामिछानेको चर्चा चुलिएको छ । इन्डियन प्रियिमर लिग (आइपीएल) को दिल्ली टिमले उनलाई २० लाख भारतिय रुपैयामा खरिद गरेपछि उनी देश बिदेशका मिडियामा छाए । उनले क्यारेवियन प्रियियर लिग खेल्ने निश्चित भएको छ । त्यस्तै नामिबियामा भएको विश्व क्रिकेट लिग डिभिजन २ प्रतियोगितामा उनले उत्कृष्ट बलिङ गर्दै नेपाललाई बिश्वकप छनोटमा सहभागी गराए । क्रिकेट सम्बन्धि सम्पुर्ण खबरको लागि मेरो क्रिकेट डट कम हेर्नू होला । प्रतियोगिताको ६ खेलमा १७ विकेट लिएका सन्दिप सर्वाधिक विकेट लिनेको सूचीमा पहिलो नम्बरमा रहदै “म्यान अफ द…
नेपाललको आँखाको नानि :”सन्दिप लामिछाने घाइते”-कस्तो छ खबर ?-(हेर्नुहोस )
February 14, 2018 admin>
स्पिनिर सन्दिप लामिछाने घाइते हुँदै मैदानबाट बाहिरीए पछि नेपाली टिमलाई ठूलो घाटा लागेको छ।फिल्डिङका क्रममा ह्यास्ट्रिङ भएपछि उनले बलिङ गर्न नसक्ने भएका छन्। यद्यपी उनी मैदान आउने सम्भावना कायमै छ।आजको खेलमा उनले २ विकेट लिएका छन्। जारी प्रतियोगितामा १६ विकेट लिइसकेका उनी सर्वाधिक विकेट लिने खेलाडीको सूचीमा पहिलो नम्बरमा छन्। काठमाडौं : अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल (आईसीसी) विश्व क्रिकेट लिग डिभिजन–२ अन्तर्गतको अन्तिम खेलमा अहिले नेपालले क्यानडासँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेको छ । नामिबियामा भइरहेको जित्नैपर्ने खेलमा नेपालले टस जितेर पहिले फिल्डिङ रोजेपछि क्यानडा ब्याटिङमा छ।२६ ओभरको चौथो बलमा नेपाललाई चौथो सफलता प्राप्त…
आईसीसी विश्व क्रिकेट लिग डिभिजन २: केन्यामाथि नेपालको कठिन जित
February 12, 2018 admin>
आईसीसी विश्व क्रिकेट लिग डिभिजन २: केन्यामाथि नेपालको कठिन जित काठमाडौँः नामिबियामा जारी आइसीसी विश्व क्रिकेट लिग डिभिजन २ अन्तरगतको सोमबारको खेलमा नेपालले बलियो प्रतिद्वन्द्वी केन्यालाई पराजित गरेको छ । १७८ रनको चुनौती पछ्याएको नेपालले ४९.५ ओभरमा ७ विकेट गुमाउँदै केन्याले दिएको लक्ष्य भेटाएको हो । नेपाललाई जिताउने क्रममा सोमपाल कामीले अन्तिम बलमा रन बटुले । नेपाललाई जिताउने क्रममा आरके पौडेलले ८५ बलमा सर्वाधिक ४७ रन बनाए । कप्तान पारस खड्काले ४४ बलमा ४२ रनको योगदान दिए । त्यसैगरि अरिफ शेखले ८२ बलमा ४२ रनको योगदान गरे । यो जितसँगै…
काठमाडौं। आइसीसी डिभिजन टु अन्तर्गत केन्याविरुद्धको खेलमा नेपाली युवा लेगस्पिनर सन्दिप लामिछानेले चमत्कारिक प्रदर्शन गरेका छन् । उनले १० ओभर बलिङ गर्दा ५ विकेट लिए । आफ्नो १० ओभरमा उनले मात्रै २० रन दिए । सन्दिपले बलिङ गरेका १० ओभरमध्ये ५ ओभरमा मात्र रन दिए । बाँकी ५ ओभरमा उनले कुनै रन नदिइ मेडन फाले । १६ ओभरसम्म कुनै विकेट लिन नसकेको नेपालको लागि १७ औं ओभरमा सन्दिपले नै पहिलो विकेट दिलाएका थिए । आफ्नो स्पेलको अन्तिम बलमा समेत विकेट लिँदै सन्दिपले ५ विकेट पूरा गरे । ४५ ओभरकोखेल सकिँदासम्म…
सन्दीप ले फेरी देखाए आफनो बलीङ को चमतकार केन्या विरुध नेपाल जित तर्फ अग्रसर
२९ माघ, काठमाडौं । आईसीसी विश्व क्रिकेट लिग डिभिजन टू मा नेपालले केन्याविरुद्ध १७८ रनको लक्ष्य पाएको छ । नामिबियामा भएको खेलमा पहिले ब्याटिङ गरेको केन्याले निर्धारित ५० ओभरमा ८ विकेट गुमाएर १७७ रन बनायो । केन्याका लागि इरफान करिमले ४२, एलेक्स ओबान्डाले ४१, धिरेन गोन्डारियाले २७ र नेल्सन ओडियाम्बोले नटआउट २४ रन जोडे । बलिङतर्फ नेपालका सन्दीप लामिछानेले ५ विकेट लिए । १० ओभर बलिङ गरेका सन्दीपले ५ मेडन राख्दे २० रन खर्चेर ५ विकेट लिएका हुन् । टस जितेर नेपालले पहिले फिल्डिङ गरेको खेलमा सोमपाल कामी, शरद भेषावकर…
Live live…. Nepal v UAE बिच भैरहेको क्रीकेट लाइभ हेर्नुहोस
नेपाल भर्सेस यूएईः नेपाललाई जित्नैपर्ने दबाव
२८ माघ, काठमाडौं । आईसीसी विश्व क्रिकेट लिग डिभिजन टूको यात्रा गरिरहेको नेपालले आफ्नो तेस्रो खेल यूएइविरुद्ध केहीबेरपछि खेल्दैछ । अघिल्लो खेलमा कमजोर मानिएको ओमानसँग व्यहोरेको हारले गर्दा नेपाललाई यो खेल जित्नैपर्ने दबाव छ । नामिबियामा जारी प्रतियोगितामा नेपालको ब्याटिङ चल्न सकिरहेको छैन । तीव्र गतिको बलिङलाई सहयोग गर्ने पीचमा नेपालका प्रमुख ब्याट्सम्यानहरुले प्रत्येक रनका लागि कडा संघर्ष गनुपरेको छ । पहिलो खेलमा घरेलु टोलीले दिएको केवल १३९ रनको लक्ष्य भेट्न नेपाललाई आच्छुआच्छु परेको थियो । दोस्रो खेलमा पनि नेपालको ब्याटिङ १३८ रनमै समेटियो, जसलाई ओमानले मात्र ४ सिवकेट गुमाएर…
खेल्कुद देश समाचार